Izinto oza kuziqwalasela ngaphambi kokuthenga i-Motorcycle yakho yokuqala
Ngoko uye wafunda iziseko zakho zokuhamba ngee-motorcycling, uthathe inkqubo yokukhusela, ugcinwe kwinqwelo yokuphepha kwaye wagqiba ukuthabatha uze uthenge ibhayisikili yakho yokuqala? Ukuba ulungele ukuthenga isithuthuthu sakho sokuqala, qwalasela ezi ngongoma ezibalulekileyo ngaphambi kokuba uthenge.
Oko Kufuneka Uyiqwalasele Ngaphambi kokuthenga i-Motorcycle
Musa ukucwangcisa ubuchule bakho. Enye impazamo eqhelekileyo phakathi kweentlobo ze-newbies kukuthenga ibhayisiki enomsebenzi ogqithiseleyo kunokuba ungayisebenzisa. Hlala kude nama-rocket crotch, ikakhulukazi nayiphi na injini enkulu kuna 600cc; xa ufunda ukukhwela ibhayisiksi elincinci, uya kuba ngumgibeli olungcono ngenxa yalo. Ngaphezu koko, emva kokuba uzuze izakhono zakho kwaye ufumene amava, uya kuba ulungele ukuphucula kwaye uyayixabisa ngokwenene ibhayisiki elikhawulezayo.
Ukuchonga iimfuno zakho. Ngaba uya kukhwela ngeendlela ezininzi? Uhambo olude ? Iikhuphethi ziya kwiimeko ezininzi kunye nobukhulu, kwaye kufuneka uqwalasele iimfuno zakho xa uthabisha ibhayisikili.
Cinga indlela oza kusebenzisa ngayo ibhayisikili yakho, kwaye ukukhwela kwindlela echaphazela ngayo amava akho; Ngokomzekelo, ukuba ufuna umdlalo weveki, unokuba unelungelo lokunyamezela ibhayisiksi e-sexy eyenzekayo. Ukuqaphela iimfuno zakho kuya kukwenza ukhethe ibhayisiki lakho elizayo ukuze libe lula kakhulu.
Yazi i zakho zikhetho. Iibhayisikili zanda ngakumbi kwiminyaka yamuva nje, kwaye ukunyuka kweentlobo ezahlukeneyo zezithuthuthu kunika inani lokhetho olunokubanika amandla kunye nolunzima. Ngexa usebenzisana neebhayisikili ezahlukeneyo, mhlawumbi uya kuhlakulela ukuthandwa okungafaniyo nokungathandekiyo, okuya kufumana isinyathelo esinye esondeleyo sokwenza isigqibo sokuthenga.
Khetha ibhayisikili ehambelana nomzimba wakho. Eli nqaku alibonakali kangangoko kunokuba livakala. Iibhayisikili ziza kwiimo ezihlukeneyo kunye nobukhulu obuhlukeneyo, kwaye kunjalo nomzimba womntu. Zama ibhayisiki malunga nobukhulu, kwaye ukuba kunokwenzeka, yithathe ukuze uqhube; uya kufumanisa ukuba isipiliyoni se- ergonomic sokugibela siya kuhluka ngokusuka kwibhayisikili ukuya kwibhayisikili. Le bhayisikili yezemidlalo owacinga ukuba yayipholile, umzekelo, unokuthi unqande amandla akho kwiindawo ezingenakuzihlaziya. Ngakolunye uhlangothi, loo moya unokukuphumelela kunye nesitulo sayo esiphantsi kunye neendawo eziphathekayo zokudakalisa. Ngeke ukwazi ukuba uzama enye ngobukhulu!
Entsha okanye Eyasetyenziswa?
Kukho inani lezorhwebo ezinxulumene neebhayisikili ezitsha kunye nezitsha ezisetyenziswayo, kwaye akukho khetho olulodwa "olufanelekileyo"; ukhetho luye ngokupheleleyo kwaye luxhomekeke kwizinto ezikhethwa nguwe (ukungabhekiseli ngemali.)
Iibhayisikili ezintsha ziza nentuthuzelo yokuthembeka kwewaranti, nangona uza kuhlawula i-premium yoxolo lwengqondo.
Iibhayisikili ezisetyenzisiweyo zilungile kubaqalayo kuba zivame ukukhathazeka ngokungonakali ngento engekafanekiyo. Baye bahlala bexabiseka kangcono kuba sele behlahlile, nangona bengenakuthenjwa njengeebhayisikili ezitsha, kunye neendleko ezingaphezulu kwiminyaka emininzi.
Cinga ngohlahlo lwabiwo lwexesha elide
Xa uzenza ukuthenga isithuthuthu, ungakulibala ukuqikelela zonke iindleko ezongeziweyo ezihambelana nokukhwela. Ngaphambi kokukhetha ibhayisikili, qiniseka ukuba uhlolisise inani le-inshurensi kunye nabathwali abaninzi, kwaye khetha isicwangciso esisebenza kunye nesabelomali sakho; ngokubanzi, ephakamileyo i-deductible, i-down the premium.
Uzakufuna ukuhlalutya indleko yendlela yokuphepha . Isigqoko somculo, ijacket, iiglavu, kunye neebhulukhwe zingongeza kwixabiso elininzi lemali.
Kwakhona, ungalibali ukuphendula ngeendleko zokugcinwa kwesondlo ezingaqhelekanga, kuxhomekeke kwenzeni kwaye uthayiphe isithuthuthu.
Nangona ingaba ilinga, musa ukuthenga ngokukhawuleza. Ukuthenga ibhayisikili yakho yokuqala kuyinto enomdla, kodwa ungagqithwa ngokutsha kwexesha. Ukuba ubona ibhayisikili kwaye uyayithanda, qiniseka ukuba uya kuyithandayo emva kokuvuyiswa kokuqala. Yiba nesithuthuthu esasetyenziswe ngumatshini oqeqeshiwe.
Funda ngokuphathelele imodeli ocingayo, kwaye uqwalasele zonke izinto-ezoqoqosho, ezisebenzayo nakwezinye izinto, ngaphambi kokuthenga kwakho. Mhlawumbi, awuyi kuzisola ngokucinga kwakho kwangaphambili!
Khetha i-Bike Uya kuvuyela ukuhamba
Abantu abanqweneli ukukhetha ukuthenga isithuthuthu ngenxa yokuba kufuneka; Ukuthengwa kwebhayisikili kudla ngokukhokelwa ngumdla. Nangona iimeko ezingenakukhunjulwa zokuqwalasela, kubalulekile ukukhetha ibhayisikili oya kuvuya ukukhwela.
Abagibeli abanamava amaninzi bayakucebisa ukuba uthenge ibhayisiki eyokuqala , kwaye ukuba unokufumana isithuthuthu ehambelana nayo yonke imigaqo efanelekileyo kwaye yenza ukuba ujonge ukukhwela, ukhethe kakuhle!
Iimoto ezona zihamba phambili kwiiLadies ezihamba phambili
Ukuhlaziywa koPhulo olutsha lwe-Harley-Davidson Sportster
Izinto Ezifanele Uzazi NgoKTM 1290 Super Adventure
Ngaba 'i-Fait Que' Inyaniso okanye Imfihlakalo? Ukuba nguLokugqibela, Sebenzisana
Iingxaki ezimbi kakhulu kwi-Wrestling History
100 Imithetho Yomoya
Uphi umehluko phakathi kweCubic Zirconia kunye neZubaconium zeCubic?
Oothixo nooThixokazi bokuPhulukisa
Mudita: Isiqhelo seBuddhist of Joyful Emotion
Abadlali kwi-60 Seconds: Shepard Fairey
Iiminyaniso zeBhayibhile Ngothando Ngomnye
Iimpawu ezivela 'uLolita' nguVladimir Nabokov
Imihla yokuzalwa yaseLatin
IsiTaliyane IsiNgxelo Esibi